Mgbe Nzeọgwụ si ala bekee laghachite Naịjirịa n'ọnwa Mee n’afọ 1960, e zigara ya Enugwu n’otu ndị agha 82 Division ebe Mejọ Agụiyi-Ironsi bụ osote onyeisi n'okpuru nwa bekee. E mechara ziga ya Kaduna n’otu ndị agha 5th Battalion ebe ya na Obasanjo nọrọ bụrụ enyi. Ndị Awụsa ndị otu ya bara ya "Kaduna" n’ihi otu o siri mara ala n’ime Kaduna. E mechara were Nzeọgwụ dị ka ọchịagha nkuzi na ọdụ ọzụzụ ndị agha bụ Army Training Depot na Zarịa. E mechara ziga ya Legọsị ebe ọ ghọrọ onyeisi ngalaba ọgụgụ isi ndị agha n’isi ụlọ ọrụ ndị agha Naịjirịa. Ya bụ ọchịagha onye Naịjirịa mbụ nwere ọkwa na FSS.
Ndị FSS (Field Security Section) bụ ngalaba ụlọ ọrụ nchekwa ndị ọrụ ha gụnyere inyocha ndị ọrụ agha naijiria (Nigerian Army), nchekwa akwụkwọ nakwa mgbochi agha nzuzo. Nzeọgwụ bụ ọchịagha onye Naịjirịa mbụ nwere ọkwa na FSS site n’ọnwa Nọvemba 1962 ruo n’afọ 1964. Chukwuma so na onye nnyocha ikpe ebubo mgbaokpuru e boro Awolowo na ndị otu ya. Akụkọ kọrọ na Nzeọgwụ kparịrị ọtụtụ ndị ọrụ ibe ya oge ọ bụ onyeisi ngalaba ọgụgụ isi ndị agha Naịjirịa. A kọkwara na ya na Minista nke steeti n’ahụ maka agha bụ Ibrahim Tako kwatara ya. N'ihi ya, e zigara ya na ụlọ akwụkwọ ọzụzụ ndị agha na Kaduna ebe ọ ghọrọ onye nkuzi ndị agha.
Chukwuma Nzeọgwụ bụ onyendu ndị agha kwaturu usoro ndọrọndọrọ ọchịchị Naịjirịa n’afọ 1966 mgbe e gburu ndị isi ndọrọndọrọ ọchịchị mmadụ iri na otu na ndị agha abụọ ma tọrọkwa mmadụ atọ ọzọ.
Chukwuma Nzeọgwụ nwụrụ n’abalị iri abụọ na iteghete nke ọnwa Julaị n’afọ 1967 (29th July 1967) n'akụkụ Nsukka. Ụfọdụ ndị mmadụ kwuru na ọ bụ ndị agha Naịjirịa gbagburu ya mana nwanne ya nwanyị siri ọnwụ na ọ bụ ya gburu onwe ya ka ndị agha Naịjirịa ghara ịkpara ya aka metọọ ya n’ihu ọha.
Ka mkpụrụ obi Chukwuma zuru ike n’ime Chineka
A gụọla ya ugboro 139